တစ်သီပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးပန်းမောင် (ခ) နိုင်ရုတ် အင်တာဗျူး (သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်) > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ / တစ်သီပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးပန်းမောင် (ခ) နိုင်ရုတ် အင်တာဗျူး (သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ September 24, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 290 Views
ရေးသားသူ: ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ > မင်းစိုင်းမွန်
ဦးပန်းမောင် (ခ) နိုင်ရုတ်(IMNA)
မေး-ဘာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက် အရွေးခံရတာလဲ?
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့လူမျိူးရဲ့အကျိူး၊ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိူးကို သယ်ပိုးချင်လို့၊ အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာပါ။
မေး-မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိူးကိုသယ်ပိုးချင်တယ်ဆိုတော့ မွန်လူမျိူးတွေမှာ ဘယ်လို လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ပါလဲ?
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့လူမျိူးမှာက ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး အဲဒါတွေကမပြည့်စုံဘူးလို့မြင်လို့ အဲဒီအတွက် အကျိူးပြုချင်ပါတာ။ ဒါကြောင့်အခုလိုဝင်ရောက်အရွေးခံတာပါ။
ဖြေ-အခုနကပြောသလိုပါပဲ ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး ဒီ ၃ခုကိုအရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ဖြေ-မပြည့်စုံနေဘူး၊လိုအပ်နေတာက အခုနကပြောတဲ့ အချက်၃ချက်စလုံးပါပဲ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး ဒါတွေကမလုံလောက်နေသေးဘူး။
ဖြေ-ဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ အများကြီးအားနည်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေကို ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရင် ပညာရေးအတော်လေးကိုအားနည်းနေတယ်၊ ကျန်းမာရေးအပိုင်းမှာလည်းအတော်လေးကို လိုအပ်နေတယ်၊ စီးပွားရေးအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အတော်လေးကို လိုအပ်နေပါတယ်။ လမ်းတံတား၊ လျှပ်စစ်မီး ဒါတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။
မေး-မွန်ပြည်နယ်မှာ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလဲရှိတယ်။ အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရှိသလဲ?
ဖြေ-တိုင်းရင်းသားတွေတန်းတူ ညီတူအခွင့်အရေး ရရှိဖို့ ကျွန်တော်အကောင်ထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဒါတွေကိုအကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
မေး။ ။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကိုဘာတွေများမှာကြားချင်ပါသလဲ
ဖြေ-ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်အမတ်လောင်းတွေထဲက အရည်အချင်းရှိတဲ့ မွန်အမတ်စစ်စစ်ကို မဲထည့်ပေးမယ်ဆိုရင် အရည်အချင်းရှိတဲ့အမတ်လောင်းတွေ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အမည်-ဦးပန်းမောင် (ခ) နိုင်ရုတ်
-မွန်အမျိူးသားကျောင်းရံပုံငွေ ရှာဖွေရေးအဖွဲ့၊ အလုပ်မှူဆောင်
-အထက(၂) သံဖြူဇရပ်မြို့ ကျောင်းအကျိူးတော်ဆောင်
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မင်းစိုင်းမွန် 2015-09-24
Tags ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မင်းစိုင်းမွန်
Previous NCA လက်မှတ်မရေးထိုးဟု နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီကပ်ပလန် NSCN-K ပြော
Next အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၊ မွန်ပြည်နယ်